Tag: emeghi iwu | Martech Zone
Anyị niile kpọrọ asị na asị adịgboroja… rue mgbe anyị anaghị
Thursday, June 15, 2017 Fraịdee, June 16, 2017 Douglas Karr
Na May 15th, enwetara m email na-achọghị (aka SPAM) site na ụlọ ọrụ na Atlanta na-agwa m ihe vidiyo vidiyo na-akọwa. Amaara m ihe ọ bụ, anyị edeela banyere vidiyo na-akọwa na ọtụtụ ma bipụtara ọtụtụ nke anyị. Azaghị m email ahụ. Otu izu ka e mesịrị, enwetara m email ọzọ nwere ederede yiri ya. Otu izu ka e mesịrị, ọzọ. Anaghị m aza ma. Ozi email anọ m na-azaghị